Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: sehatra ifaninanan’ny harena sy ny fahantrana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: sehatra ifaninanan’ny harena sy ny fahantrana
Mandratra sofina toy ny fahenoana ompa ny filazan’ny vahiny iray mpizaha tany nandalo teto amin’ny tanàna nandritra ny iray volana araky ny filazany, tsy mahantra ny Malagasy hono raha ny fahitany azy. Notsipahiny mivantana ny filazana heno matetika hoe misy ary betsaka ny harena eto Madagsikara fa ny mponina kosa mahantra.
Na taiza na taiza toerana notsidihiny tamin’ny fitetezany ny nosy, afa-tsy ny any amin’ny tany efitra, miray monina hatrany, hoy izy, ny mpanana sy ny mahantra. Toy ny any amin’ny firenena maro, be noho vitsy ny mpanana fa ny fifanosonan’ny fahantrana sy ny harena eto amin’ny nosy dia mivoatra am-pilaminana, tsara rary toy ny hoe zava-boahary tsy hita hihoarana. Ny fahantrana tsy mandefitra hanahy voronkitsay. Ankilany ny fanjelanjelatry ny harena, andaniny ny harena tsy miafinafina amin’ny fideraderana eo anivon’ny fahantrana. Arak’izay voalaza etsy aloha anefa, ny hamaroan’ny olona sahirana no manaitra ny mason’ireo tsy zatra. Ambonin’izany anefa, tsy azo odian-tsy jerena ny elanelana mampiavaka ny mpanana sy ny mahantra. Ny loza dia arakaraky ny fandrosoan’ny taona dia tazana miitatra hatrany io elanelana io.
Raha izany no mitohy dia ho eo izay ho latsaka am-pahoriana any anaty hantsana lalina mandritra ny fisondrontan’ny olom-bitsy any an-tendron’ny fanefoefona. Tsy lavitra intsony ny fahatongavana amin’izany fisehon’ny toe-piainana izany, asa izay toeran’ny rariny amin’izany. Tsy ny fisian’ny olona manana sanatria no andeha hankahalaina, atao fanafodin’ny fangirifirian’ny fahantrana. Tsy ny fitsinjovana fotsiny ny olona sahirana koa dia ampy hampiova ny fitrangan’ny tsy rariny. Na ilaina aza ny famafana lelo, tsy ampy ho fitsaboana sery.
Ela izay nifandimbiasana teo amin’ny fitondrana izay. Nifaninana avokoa tamin’ny filazana ny fahaizana amin’ny fahavitana azy. Tsy nisy anefa ny fahombiazana azo tsapain-tànana. Ny fitomboan’ny fahasahiranana aza no niseho miaraka amin’ny fitomboan’isan’ireo olona tafiditra an-katerena. Hatrany hatrany, ny tarehimarika milaza ny taham-pandrosoan’ny toe-karena no vetsovetsoina. Tsy miteny amin’ny vahoaka anefa izany noho ny tsy fifanandrifiany matetika amin’ny taham-pandrosoan’ny fatram-bary ao anaty lovia.
Efa nosedraina ny tsy fahombiazan’ny fanetrena ny fananan’ny mpanana noheverina hampisondrotra ny sahirana. Efa nilaozana koa ny fampirafesana ny sokajy samy hafa eo amin’ny fiaraha-monina (lutte des classes) nefa raha mitohy toy izao ny fiitatry ny elanelana, sarotra ny hino ny tsy hisehoan’ny fifandonan’ny sokajy (clash classe vs classe).